musha FOOTBALL MANAGER Jose Mourinho Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeMutungamiri weBhola uyo anozivikanwa zvikuru nezita reNickname; 'Iye Anokosha'. Yedu Jose Mourinho Mwana WeChiitiko pamwe Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake. Pasina mubvunzo, Jose Mourinho anotarirwa nevakawanda sevanonyanya kubudirira uye vanonyanya kuvengwa nemutambo webhokisi munyika.
Jose Mourinho Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Early Childhood
Jose Mourinho Childhood Indaba
José Mário dos Santos Félix Mourinho akaberekerwa muSetúbal, Portugal paJanuary 26th, 1963 kuna baba Mai José Félix Mourinho, uyo aiva Mudzidzisi weChikoro uye amai Maria Júlia Carrajola dos Santos, uyo aiva mudzidzisi wepuraimari.
Jose's akakurira kubva kumhuri ine tsika dzakanaka. Amai vake, Maria Júlia Carrajola dos Santos, vaionekwa sechingwa chemhuri chavakakunda. Kubva kubva kune vane pfuma yakawanda vane rudo vemhuri yakavezwa nzira dzakakonzerwa naJosee kuti akwegura uye baba vake vaifambisa kufamba kune izvo zvakanzi 'basa rakanaka rekuchengetedza basa'. Sezvo mwana, aive nemikana yekuwana mikana yose mwana wose muduku aizorota.
Jose Mourinho Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Kudzvinyirira Kwevabereki uye Kusarudzwa Kwebasa
Kubvira achiri muduku, bhora rakanga riri chikamu chikuru cheupenyu hwaMourinho. Iwe, maiva nemafungiro akasiyana-siyana pamusoro pezvakaitwa nevabereki vake kunyanya amai vake vaida kwaari. Amai vake vapfumi (Maria Júlia Carrajola dos Santos) vaifunga kuti mwanakomana wavo anofanira kunyanya kuisa pfungwa pamusoro pezvidzidzo kuti ave murume webhizimisi akabudirira sababa vake Mr dos Santos Snr.
Baba vaJose avo vaiva muchengeti wemagariro vaiva nemaonero akasiyana. Aida mwanakomana wake kuti ave nyanzvi yebhola. Iwe haana kumbofanira kupedza nguva yakawanda naJose nekuda kwekuzvipira kwekuzvipira muguta guru rePorto 'uye Lisbon. Nekureva, Kubvuma kwekukwikwidza kweBhola nePiroto kwaireva kuti Félix Mourinho aiwanzoparadzaniswa nemwanakomana wake. Iwe, kusasarudzwa kwepasipo kwababa vaJose hakuna kuuraya kurota kwake. Zvisinei, kupatsanurwa uku kwakaita kuti Maria Júlia Carrajola dos Santos mukana wekusarudza ramangwana romwana wake. saka zvichiita kuti Josese anotambudzwa noupenyu hwake hwekudzvinyirira.
Amai vake vakanyora mubhizinesi rebhizimisi, asi Jose Mourinho akabuda musi wake wekutanga, akamira panzvimbo yake ndokusarudza kuti angada kutarisa pamitambo. Akasarudza kuenda ku Instituto Superior de Educação Física (ISEF), Technical University of Lisbon, kuti adzidze zvemitambo yesayenzi.
Josese anonyanya kufunga nezvemitambo yesayenzi akaisa nheyo kune zvaari nhasi.
Jose Mourinho Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Kutevera tsoka yababa vake
Mourinho kunyange zvazvo paaidzidza zvenguva-pfupi akaenda kunopinda mavhesi ekutamba kwababa vake uye apo baba vake vakazova mudzidzisi, Mourinho akatanga kutarisa zvikamu zvekudzidzisa uye akadzidza nzira yekutsvaga mauto akarwisa. Jose Mourinho ave achida kutevera netsoka dzababa vake.
Baba vake munguva pfupi yapfuura Pollemma nyora pasi rine izvi kuti utaure;
"Paakanga ari 13 kana 14 ndakava maneja uye ndaifamba kufamba. José aizogara achiwana nzira yekuenda kwese kwandakanga ndiri. Nomudzidzisi, kana kunyange hove yekutakura hove, aizongogara ari neni nenzira imwe neimwe yevhiki. Akatanga kutarisira bhora vakomana. Aizozviisa pasi pechechi yedu. Ndaimupa mirayiridzo yaaizoenda kune vatambi, kumhanyira kune rumwe rutivi rwemuti kuti uvaudze. Saka iye akatanga mangwanani-ngwanani kuti atarise maitiro nemaitiro ekutamba ...
Muduku Jose Mourinho nababa vake
Paakanga ari 15 kana 16 akandiudza kuti aida kuva maneja. Akatanga kutarisa makirasi atakanga tichienda kutamba uye kugadzirira mharidzo, uye izvozvo zvakandibatsira zvakawanda. Ndinoyeuka apo ndaive maneja weUniao de Madeira kuti takaenda kunotamba muAmadora. Taida bhora redu kuti tibate pamitambo yekutamba kune imwe nzvimbo mumutambo wePortugal League. "
Jose akabatana neCF Oselenenses mushure mokunge apedza kudzidza. Panguva iyoyo, baba vake vakatamba mutambo wepamutambo kuOs Belenenses uye Vitória de Setúbal, vachiwana imwe chikwata chePortugal munguva yebasa rake. Mourinho akatanga kutevera tsoka dzababa vake kuburikidza nekubatanidzwa kwake muhutano hwehutano. Iwe waive mutambi uye hausi muchengeti wemagariro. Akaita muPutukezi Second Division. Zvinosuruvarisa, kubatanidzwa kwake mumutambo webasa kwakazadzwa nematambudziko nematambudziko.
Jose Mourinho semutambo wechirwi - Kubatana mumutambo webasa
Jose Mourinho akaita dhiyabhorosi yake yekutanga kuRio Ave mu1980. Pano, Mourinho akashanda seCentral Midfielder uye akaita 16 sangano rekuonekwa - kugovera zvinangwa zviviri.
Pazera remakore 21, Mourinho akatamira kuSesimbra, kwaakagadzira 35 sangano rekuonekwa uye akawana chinangwa chimwe. Mumwe mushure mutsva wakaendesa Mourinho kuComércio e Indústria, kwaakagadzira 27 sangano rekuonekwa uye akawana 8 zvinangwa.
Jose Mourinho Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Kurwisana kurarama maererano nenhaka yababa vake
Jose Mourinho akabatanidzwa mumutambo wechipfuva chakanga chisiri pfupi. Akanga aita basa rekusiya basa mushure mekunge achitsoropodzwa kakawanda nekuda kwekushaikwa kwechikonzero chekuda uye simba mumutambo. Panzvimbo yekuenderera mberi mukurwadziwa, akasarudza kuisa pfungwa pakuva mudzidzisi webhola panzvimbo. Kubvisa kwake nguva yepakutanga kwakaratidza kuguma kwekurwa kwekurarama kusvika kune nhaka yababa vake yekutamba kune dzimwe nyika.
Jose Mourinho Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Kuchinja pakati peCoaching nekuShandura Mabasa.
Jose Mourinho akatanga basa rake rekudzidzisa kuburikidza nekudzidzisa dzidzo yepanyama pane dzakasiyana-siyana zvikoro uye mushure memazuva mashanu, akanga awana diploma yake, achigamuchira nguva dzose mavara akanaka mumakore ose. Mourinho wekutanga akaratidza tarenda yake yekudzidzira nemakore mashoma ekugadzirisa masimba ekuBenfica uye União de Leiria, achitora chikamu ichi kusvika kune yepamusoro.
Mushure mekubudirira uku pfupi, akaenderera mberi nekudzidziswa nekuenda kune imwe nguva yekudzidzisa makosi yakachengetwa neChirungu neScottish Football Associations. Basa rake rakabata meso akangwarira aimbova maneja weScotland Andy Roxburgh. Akanyatsocherechedza mauto echiPutukezi aya uye akatarisa mashoko.
Gare gare, Jose Mourinho akatsvaka kujekesa basa rekudzidzisa mumutambo webhola nekusanganisa dzidziso yekudzidzira nemafambisirwo emagariro ekufunga kwemashoko. Mushure mamashure ari kushanda semubatsiri mutevedzeri uye mutambi wechikwata chevechidiki, Mu 1992 Jose Mourinho akazviona achibatanidza mabasa nekuva muturikiri we Sir Bobby Robson ku Sporting Club Portugal. Apo Robson akaenda kuBarcelona mu1996, Mourinho akatevera - kudzidza Chikatalani uye kuva chikamu chinokosha chegadziriro.
Jose Mourinho the Translator
Iye anoteverawo Bobby Robson ku FC Porto muna Dec 1993. Vose ava vakava noukama hwakanaka hwekushanda naJose Mourinho vachidzidza kubva kuna Bobby Robson naRobson vachiwedzera kuvimba nemafungiro evechidiki Mourinho.
Mourinho akapiwawo basa rekutarisira Barcelona B team, uye Barcelona A yeimwe makwikwi emukombe. Somubatsiri mutevedzeri, Jose akabatanidza vamwe vevatambi vakanakisisa munyika muno saRivaldo, Figo na Guardiola naLuis Enrique.
Uchapupu hwokuti Jose Mourinho akarovedza Ronaldo Luís Nazário de Lima
Zvinonakidza kuziva kuti Jose Mourinho akarovera Pep Guardiola. Akanga achiri mutungamiri wepamusoro apo Pep Guardiola achiri mutambi weBarcelona.
Jose Mourinho akarovera Pep Guardiola kuBarcelona
Apo Robson akabva mubati, Mourinho akagara, achishanda muDutchman, Louis van Gaal mumakore maviri akabudirira kweBarcelona.
Jose Mourinho naLouis van Gaal kuBarcelona.
Jose Mourinho Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Kutanga Kudzidzisa Mazuva
Jose Mourinho akadzoka kuPorto mukutanga kwe2002 semudzidzisi mukuru, achikunda Primeira Liga, Taça de Portugal, uye UEFA Cup mu2003. Mumwaka unotevera, Mourinho akatungamirira boka kuti akunde muSainttaça Cândido de Oliveira, kumusoro kwechibvumirano kwechipiri, uye akakunda kukudzwa kukuru muEurope football football, UEFA Champions League.
Mourinho's UEFA Champions League Zuva reKubwinya ku FC Porto
Mourinho akatamira ku Chelsea gore rakatevera ndokutora chikamu che Premier League nerepanhau re 95, chikwata chekutanga chechikwata mumakore 50, uye League Cup munguva yake yokutanga.
Jose Mourinho Kubwinya Kwemazuva Ekutanga kuClean FC
Mugore rake rechipiri, Chelsea yakachengeta Premier League uye muna 2006-07 akatora chikwata ichi ku FA Cup uye League Cup kaviri.
Mourinho akasiya Chelsea muSeptember 2007, pakati pemashoko ekukwikwidzana nemuridzi wekambani Roman Abramovich. Mune 2008, Mourinho akatamira kuSerie A club Inter Milan. Mumwedzi mitatu akawana kukudzwa kwake kweItaly, iyo Supercoppa Italiana, uye akapedza nguva yacho nekukunda Serie A. Muchi2009-10, Inter yakava yambiki yekutanga yeItaly kukunda kutengesa kweSerie A, Coppa Italia uye UEFA Champions League, uyewo nguva yekutanga Inter yakakunda kupikisa kwekupedzisira kubvira 1965. Ndiye mumwe wevashandi vashanu chete kuti vakunda European Cup nemapoka maviri akasiyana, pamwe naErnst Happel, Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes naCarlo Ancelotti. Akakunda mupiro wekutanga weFIFA World Coach of the Year in 2010. Akabva asayina na Real Madrid mu2010, achikunda Copa del Rey munguva yake yokutanga. Gore raitevera, akakunda La Liga uye akava mudzidzisi wechishanu, mushure meTomislav Ivić, Ernst Happel, Giovanni Trapattoni naEric Gerets, kuti vakunda mazita ekubvumirana mune dzimwe nyika ina dzakasiyana: Portugal, England, Italy neSpain.
Mushure mokubva kuMadrid munaJune 2013, Mourinho akadzokera kuEngland kuzobata Chelsea kwechipiri chipikisa, panguva iyo vakakunda rimwe chikwata chamakwikwi, asi rakasimwa pa 17 December 2015, mushure mekushaya mamiriro ekutsvaga kwakasara kubva kuBellan kunze kwenharaunda yekudarika.
Achitevera mwedzi yakawanda kubva mumutambo mushure mekupererwa nebasa rake kuCentral kwechipiri, Mourinho akasimbiswa semutungamiriri mutsva weManchester United pa 27 May 2016.
Nemhaka yezivo yake yeruzivo, hunhu hunotyisa (asiwo hunokakavadzana) unhu uye izvo vadzivisi vake vanoona sechisimbiso pakuwana migumisiro pakutamba mutambo wakanaka, anowanzoonekwa, nevose vanoyemura nevatsoropodzi, sevanomutsiva mutariri weArgentine Helenio Herrera.
Jose Mourinho Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Jose Mourinho akaroora kubva 1989. Akaroora musikana wake weAngolan achiri kuyaruka Matilde "Tami" Faria. Vakatanga kutamba vachiri vaduku muSetúbal, Portugal. Vabereki vake vakamuberekera muAngola vachishanda sevashandi vanobatsira rubatsiro munyika.
Jose aifanira kuenda kwaari nekuda kwekurera kwake nekuzvininipisa. Matilde anozivikanwa kuva nekuremekedza, kuzviisa pasi, kuzvidzora uye kunyanya kukosha. Anopedza nguva yakawanda yenguva yake kushandura zvakasimba kubatsira vanhu misangano kuAfrica.
Ndicho chikonzero chekuda kwaJose Mourinho kune veAfrica vemaqhesi uye basa rake rakasununguka rekuAfrica.
Mwana wavo wokutanga, mwanasikana Matilde, akaberekerwa mu1996 uye vakava nemwanakomana wavo wokutanga, José Mário, Jr. (uyo anotamba bhora reboka revechidiki reFulham FC), makore mana gare gare.
Mourinho, apo akazvitsaurira kumutambo, anorondedzera mhuri yake sechinhu chikuru chehupenyu hwake uye akacherechedza kuti "chinhu chakakoshesa mhuri yangu uye kuva baba vakanaka." Akasarudzwa seNew Statesman Man of the Year 2005 uye akarondedzerwa semunhu akazvipira kune vose vemhuri yake uye basa rake. Pamagumo e2011, Jose Mourinho akatumidzwa kuti 'Rockstar of the Year' neSpain edition yeRolling Stone magazini uye yakaiswa pane chinyorwa chekutanga chaDecember.
Jose Mourinho Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts - Zvakavanzika Zvepamusoro Kupomerwa
Jose Mourinho akambopomerwa mhosva yekurarama nemadzimai anoshamisa, Elsa Sousa mushure mokunge mudzimai wake adzokera kwemakore maviri.
The Mourinho Secret Affair Accusations
Maererano ne sgforum mushumo, Mourinho, akasangana neElb blonde paaidzidzisa boka reguta duku reLeiria mumutauro wePortugal. Akamutora pamwe naye kuna FC Porto, basa rake rokutanga guru apo vaviri vacho vakararama kwemwedzi masere muchitoro chakagadzirwa nekambani. Mourinho akatomutaurira semudzimai wake kuvadzidzi vechi FC Porto uye vamiririri. Paaiita izvozvo, mudzimai wake chaiye Matilde akagara muguta ravo rekuSetabul nemwanasikana wavo, anonzi Matilde uye mwanakomana waJose Junior.
Mutungamiri wekare weBlues ave achipomerwa mhosva yekumuputira nezvipo ndokumuudza kuti ndiye rudo rwake rwechokwadi. Mifungiro yaakadzidzisa mudzimai waJose yakasvika pakupedzisira pakarepo apo Mrs. Mourinho chaiyo akadzoka. Mudzimai wake Matilde, waakaroora muna 1989, akanga asingazivi kuti aive noupenyu huviri.
Jose Mourinho Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Pamusoro peBhuku Rake Rakavhiringidza
Mourinho akaraira kukunda kunze kwebhokisi mu2004. Bhuku rakanzi Jose Mourinho - Made in Portugal:
Bhuku rinopikisana naJose Mourinho
Vakuru Biography nemunyori wenhau wePortuguese Louis Lourenco, ndiye anonyanya kutengesa munyika, zvisinei nepo chikwata chePortuga chichiedza kuchisiya kubva pakubudiswa munzvimbo yekutanga.
Bhuku racho rakaratidza mhuri yaMourinho uye kutya kwavo kwaari. Bhuku racho rinorumbidza unyanzvi hwake hwokushandura hunoreva kukwanisa kwake kutaura chiPutukezi, Chirungu, Sipanishi, chiCatalan, chiItaly uye chiFrench.
Iwe, iye akarovawo kune vanhu vachiri kumuti iye mushanduri chete uyo ane basa rokutarisira.
Jose Mourinho Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Mazano Okubatsira
Chelsea inobata Jose Mourinho akambomukumbira kuti FA ipe zvipo kune mimwe mitambo yebhola yebhaziro iye achiri kutobhadhara mumhosva yezvakaipa zvenguva yemberi. Charity pano inoreva kupa rubatsiro kune avo vakadzingwa muAfrica.
Jose Mourinho, the Self Styled Charity kupa
Panzvimbo pokuenda kunotarisa Cup Cup World Cup muBrazil muzhizha iyi, Mourinho akapedza nguva achishanyira vana vane nzara nevatachiona hweHIV muAvory Coast. Akapiwa basa reMusangano weUnited Nations weWorld Food Program.
Jose Mourinho Humanitarean Works for Africa
Muna 2005, Mourinho akapa gakoti kuti atengeswe kuti abatsire kuunza mari yeTunami Relief nezvimwe zvipo. Mutungamiri Marc Thompson akaratidza kuti mumwe mubhadhadziro akabhadhara € 25,800 yejasi raMourinho pa fundraiser yakaitirwa paStford Bridge. Iyo yekutengeswa kwechikwata chaMourinho 'chine dhaka' yakaratidza chikamu mukukwirirana neAIDS 545,000 nokuda kwechikonzero chacho.
Mudzimai waMourinho aida kubatsira vanhu uye aifamba-famba munyika yose kubatsira varombo munharaunda yavo mukuda kwake kubvisa nzara. Jose Mourinho, mudzimai wake nevana vakanga vamboenda kuIvory Coast kunoona hurombo hwehutano ikoko.
Jose Mourinho Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Kubatana nemapurisa
Muna 2007, Mourinho akabudiswa nemapurisa akanyevera mushure mekunge aramba kubvumira mapurisa kuti aparadzise imbwa yake yemhuka, Leya. Asati amhanya kumba achibva kumitambo yezvikwereti achitevera kupedzisira kunobva kumudzimai wake, muchengeti weConstall-Chelsea akasunungura mhuka kubva mumaoko ehutano vakuru uye akakukurudzira kuti ibude pasi mumugwagwa, maererano nevanoona.
Chikonzero nei Jose Mourinho's Dog (Leya) akasungwa
Zvinonzwisisika kuti mukuru wehurumende aida kuparadzanisa imbwa, achitenda kuti yakatorwa kunze kwenyika ndokudzorerwa kuBritain pasina zvirwere.
Mourinho akagamuchira chiyeuchidzo chekudzivisa hurumende kusaita basa ravo. Imbwa yake yakashata duku, Leya akabva abatwa nemapurisa.
Vanry Angley vateveri vekutsvaga kwemazuva avo vaitevera nekuisa mabhenji kuratidza 'Jose Dog is Innocent'. Havana kumbobvumira kutsvaga kuti imbwa isunungurwa pakarepo.
Angry Chelsea Fans inoda kuti Reya abudiswe
Kukurudzira kwavo kwakaramba kuchiita kuti zviremera zvichinje mafungiro avo nekusunungura varombo Leya.
Jose Mourinho Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -chitendero
Jose Mourinho's Religious Belief
Mourinho muKaturike anozvipira nokutenda. Akamererwa saizvozvi (semutsika wePutukezi) uye anorumbidza kubudirira kwake mubhoza kuna Mwari nekutenda kwake:
'Ndinonyengetera zvakawanda. Ndiri Katurike, ndinotenda kuna Mwari. Ndinoedza kuva munhu akanaka saka Anokwanisa kuva nenguva shoma kuti andipe ruoko kana ndichichida '.
Mourinho anowanzotarisana nharo uye (zvichida zvenhema). Yakave yakaziviswa kuti paakatora nzvimbo yekutarisira ku Real Madrid, akatsvaka mazano nekuropafadzwa kwevamwe varoyi veKenya, avo vamiririri vake vakapindura kuti:
'José Mourinho anonyanya kuva Akatorike uye anotenda muna Mwari. Mumamiriro ezvinhu ane hanya noupenyu hwake hwehutano, anotenda mubasa rakaoma uye kwete muzvishamiso zveumwe muroyi wekare.
Zvisinei, vamwe vangasabvumirana kuti zvose Mourinho anotenda kuti kune basa rakaoma. Iye anonyanya kutaurwa sekutonga kukuru kwevatambi vari muboka rake.
anozviti chiPutukezi akachinja maoko ake kumafirimu umo anowanzoita papa.
Jose Mourinho kuti aite saPapa Francis muIndaneti yeMifananidzo
Iko yaimbova Chelsea Boss yakabvumirana nekodzero yekukwereta inzwi rake kune unhu hwaPapa Francis mune imwe firimu yehupenyu nekuda kwekusunungurwa mu2017 kwemazana emakore ekuonekwa kweMhandara Mariya muFatima, Portugal.
Mourinho achava izwi rePontian pontiff muchiPutukezi, ChiChirungu, Spanish nechiItaly - "mimwe mitauro yenyika iyo (iye (Mourinho) atove ari mhare", akadaro Imaginew chikwata chePortugal.
Kushandiswa kwaMourinho mufirimu yehupenyu "yakatogamuchira kugamuchirwa kweVatican", akadaro kambani yekugadzira.
Jose Mourinho Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Kubva kubva pamba rakapfuma
Jose Mourinho nababa Felix Mourinho- Vane Pfuma Mhuri
Jose Mourinho akawedzerwa mhuri yakanyanyogadzirisa uye anowedzera mubhizimisi rebasa uye bhizinesi rebhizimisi. Mhuri yaamai vake avo vaibhadhara mari yekuvakwa kweViório de Setúbal yematambo ezuva ranhasi muguta ravo rePortugal.
Ndizvo zvakaita Jose Mourinho Mhuri yakabatsirirwa muSiteyumu Yakavakwa
Vanun'una vake ndivo ndivo vaibhadhara mari yekuvakwa kweToória De Setubal yenhandare mumatambo ekutanga e70s. Izvo zvaive zvakadaro zvakaratidza kuti kuwa kweAntónio de Oliveira Salazar's Estado Novo muApril 1974 yakakanganisa zvakanyanya pamabhizimisi ake sezvo yakarashika zvakawanda zvekutsvaga kwake ipapo.
Jose Mourinho Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukama nevana
Mufananidzo waJose Mourinho nemwanasikana, Matilde
Mourinho nemwanasikana wake Matilde ndivo vanozivikanwa zvikuru mumhuri yavo. Iye anonyatsozivikanwa munzanga yepamunharaunda muLondon achienzanisa nedzimwe nyeredzi dzenyeredzi dzenyika kusanganisira Haran imwe yekutungamirira.
Mwana waJose Mourinho akwegura akambopinda mushure mekudzidziswa kwegore maviri naFulham.
Jose Mourinho uye Mwanakomana, Jose Mario Mourinho Jr.
Iye ndiye muchengeti wemagariro uye akamboita muchechi yechechi yeCentral neReal Madrid apo baba vake vakambodzidzisa. Kuzadzisa izvo baba vake vakanga vasina kukwanisa kuitira tateguru vake ndicho chido chake chekurota.
Jose Mourinho Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Tatoo Facts
Mutambi wechiPutukezi akawana tattoo yake yekutanga pazera re 50, uye, zvinoshamisa, hazvina chokuita nebhola.
Mourinho sezviri pachena akabhadhara £ 80 pamutambo uyo unoratidza mazita emudzimai wake Matilde Faria nevana vake.
Akaratidza kubudirira kwake mumutambo webhola kudzidzisa kuvatsigirwa kwaakapiwa nemhuri yake. Chiratidzo hachiwanzoonekwa kuvanhu vose sezvo inki iri paruoko iye anowanzovhara maziso.
Jose Mourinho Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Lifestyle Spending
Akararama hupenyu hwake hwose kunze kweimba yake pachake uye akagara muhotera kunyange iye ainge achinyunyuta pamusoro payo nekugara kunze kwemhuri yake nguva dzose. Iye achangobva kuwana imba yakakodzera £ xNUMXmillion castle iri kunze kweguta re welsh yePuthin iyo inenge awa imwe chete kubva kuManchester.
Mufananidzo weMourinho's Mansion muWales
Imba inoita seyakazana nemakore akwegura asi chaizvoizvo imwe yeimba yakaduku pane imwe yeiyo ye39years yakare yakagadzirwa nehuwandu hwepurasitiki pasi pevhu rinopisa uye kaviri glazing.
Iine lunge welsh dragon iyo inopisa moto apo motokari dzinopinda musuo dzinounza moto. Imba yacho inosvika kane inodhura kupfuura imba yaMourinho iri muLondon. Jose Mourinho ane zvakawanda zvekutengesa motokari pakati pezvinhu zvinowanzogadzirwa naVadi, Porsche, Aston, martin naFerrier.
Jose Mourinho Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Akafuridzirwa naEva Carneiro
Anonyadzisa pachena dare rekare reku Chelsea, Eva Carneiro uye chikwata chechikwata Jon Fearn, achivatumidza kuti 'naive' mushure mokunge vatiza kumatope kuti vabate chirwere cheEdheni chakakuvadzwa
Izvi zvakaita kuti aimbove chiremba weChelsea, Eva Carneiro anyore kusiya basa kubva mukirabhu mushure mekupambwa kwakaitwa Mourinho, makumi mana nemasere, uyo waakamuti "mwanasikana wechipfambi" muchiPutukezi.
Jose Mourinho Akafuridzirwa naEva Carneiro
Mushure mokusiya kirabhu, akazadza chisarudzo chekuita zvepabonde pamusoro peClub naMourinho izvo maererano nezvo girazi yakanga yakawanda kupfuura £ 1.2m. Asati atora basa, Eva akamborambidzwa kubva kune rimwe bhenchi rekutanga uye akatumidzwa kushanda neboka revakadzi madzimai naJose Mourinho.
Chelsea FC naJose Mourinho vakafara kugadzirisa nyaya yacho uye vakakumbira ruregerero "vasingabatsiri kwaari uye nemhuri yake nokuda kwekutambudzika kwakakonzerwa". Vose vakapindirana vakabvumirana kunyadzisa kukuru kwekubhadhara kune chiremba wekare wekambani asati apedza uchapupu hunopesana navo pamusoro pevanhu.
Carneiro akabudisa zvinyorwa zvake, achiratidza kubatsirwa kwake pakugadzirisa nyaya yacho.
"Yave iri nguva yakaoma uye inotambudza ini nemhuri yangu uye ini zvino ndinotarisira kufambira mberi noupenyu hwangu," akati.
As DailyMail yakashumwa; Jose Mourinho pamagumo emhosva yacho akati Dr Carneiro akanga atengesa kambani, asina kuteerera mirayiridzo yake nekubata Edheni Hazard pachikomba uye akanga ane nzara mukurumbira akaramba achirota kuti agere shure kwake paTV.
Jose Mourinho Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Akafuridzirwa neRafa Benitez's Wife
Rafa Benitez's Mudzimai akambove akacheka kuti murume wake apedza basa rake achidzikisa upsi hwakasara Jose Mourinho. Izvi zvakanzi mushure mokunge murume wake asarudzwa Real Madrid. Iyo inouya zvakare mushure meBenitez ichionekwa sekutora mutero weboka rechitatu iro raimbogadziriswa naMourinho.
Jose Mourinho's Fued naRafa Benitez's Wife
Jose Mourinho, kunyange zvakadaro, akataurira mudzimai weRafa Benitez mushure mokunge ataura mukuru weBal Madrid anogara “achigadzirira mashira ake”.
The boss Ex- Chelsea vanodzoka zvakare vachiti: "Kana akachengetedza kudya kwemurume wake iye achava nenguva shoma yokutaura pamusoro pangu."
Jose Mourinho Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Kuita seMupoteri
Mourinho akaudzwa kuti akaputirwa muChikwata chekugadzira chikwata mumucheka wechipfuva munguva yeEurope yaipikisana neBayern Munich, paainge achishanda kurambidzwa kwemashoko.
Jose Mourinho Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -The Antagonzing One
Mufananidzo waJose Mourinho achipemberera chikanganiso chaSteven Garrard
Akapemberera Steven Gerrard akazoguma nechinangwa chake mumugumo we2005 Carling Cup nekumhanya pamwe chete nechepamusoro pamberi pevasi vemu Liverpool vachiita 'shush' kufamba nemunwe wake pamiromo iyi.
Jose Mourinho Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -The Embarrassing One
Kupesana pakati paJose Mourinho naArsene Wenger vari pakati pezvinonyanya kutsvaga-zvinotarisirwa muLigan League.
Hondo pakati paJose Mourinho naArsene Wenger
Jose Mourinho akamboti Arsene Wenger 'muongorori mukukundikana' munaFebruary 2014, pamwe nevakuru veArsenal vachitaura mashoko okuti 'kunyadzisa' vose Chelsea naMourinho.
Jose Mourinho Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Iyo Meded-Inokanda
Akabatwa nemutambo wake weChirungu Premier League mumutambo weCentral, uye paakapiwa imwe ne FA, akakanda izvozvo kune vatsigiri zvakare.
Jose Mourinho- Iyo Medal Inokanda Rimwe
Mourinho akati iyo 'medal yaive yevanhu vose'.
Muito bongo, Traça a vida de Mourinho kubva pachirwere. Boa leitura pois fiquei elcidado para Jose Carreira de Jose Mourinho como um grande treinador
Muito bongo, Traça a vida de Mourinho kubva pachirwere. Boa leitura
Jonny Evans Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts